Sidee baan ka My Lexar JumpDrive soo kaban karto, Data jirta II?
Kaliya waxaan saaro my Lexar JumpDrive aan gujinaya aan computer inay si badbaado leh saaro. Haddaba markaan u dib-u-xirmaan aan computer oo isku day inaad la furo, oo waxba gudaha u hesho. Dhammaan files dadkaygii waxaa loo. Maxaan u baahan tahay in la sameeyo si ay u soo kabsadaan files aan ka?
Users oo farabadan ayaa lagu wareero oo ku saabsan sida loo soo ceshano files lumay ka qalab lagu kaydiyo digital. Warka wanaagsan waa in, haddii aadan xog cusubse waxaa lagu shubaa aad Lexar JumpDrive, waxaad leedahay fursad aad u weyn inuu ka soo kabsado xogta ka. In alla intii uu la aqoonsan karin sida drive adag on your computer, waxaad isticmaali kartaa software ka soo kabashada xogta Lexar JumpDrive si aad u qanciso maskaxdaada.
Waxaa jira xaddi weyn oo barnaamijyada soo kabashada xog ku saabsan internetka. Halkan waxaan si adag ugu talinaynaa Wondershare Data Recovery , Wondershare ama Data Recovery for Mac aad u. By isticmaalkiisa, ayaad ugu soo ceshano kartaa in ka badan 550 qaabab file u gaar ah, oo ay ku jiraan videos, sawirada, Cajalado, waraaqaha xafiiska, emails iyo waraaqaha. Qalabkani waxa uu awoodo inuu ka soo kabsado xogta waayay tirtirka shil & formatting, shil xoog, Baadi nidaamka ama weerar virus. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay sameeyaan qasabno qaar ka mid ah si ay u qabtaan soo kabashada oo dhan.
Qabtaan Lexar JumpDrive Recovery in 5 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Run Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad geli doontaa "Wizard Mode". Just guji "Next" in ay sii wadaan.
Tallaabada 2 In tallaabadan aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha nooc aad rabto in aad dib u soo ceshano. Sida aad ka arki kartaa image hoos ku qoran, waxa kale oo aad dooran kartaa "Dhammaan Noocyada File". Ka dib markii xulashada noocyada file, guji "Next" u dhaqaaqo.
Tallaabada 3 Halkan waxaad ka xulan doonaa xijaab si scan for files lumay. Si aad u soo kabsado xogta ka Lexar JumdDrive, kaliya aad u baahan tahay si ay u xirmaan your computer dooro disk adag, waayo, ka dibna riix "Next".
Tallaabada 4 Hadda waxaad riixi kartaa "Start" in baarista Lexar JumpDrive.
Fiiro Gaar ah: Waxaa jira laba hab bandhigay interface: "Enable Deep Scan" iyo "Enable ceeriin Recovery". "Deep Scan" caawisaa in aad ka bogsato xogta waayay formatting, iyo "Enable Recovery File ceeriin" aad u saamaxaaya in ay dib u soo ceshano xog ah in aad waqti dheer lumay ka hor sababo kala duwan.
Talaabada 5 Marka scan ay ka badan tahay, dhammaan faylasha helo waa la soo bandhigi doonaa noocyada file bidixda ee suuqa. Waxaad iyaga ku eegaan karo in lagu hubiyo sida badan ee aad files doonayo in lagu soo kabsaday karo.
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad u computer badbaadiyo. Ma Fadlan iyaga ku badbaadin in aad JumpDrive isla markiiba ka dib markii dib u soo kabashada, ama dib u soo kabashada guuldareystaan ​​laga yaabaa.
> Resource > Ladnaansho > Lexar JumpDrive Recovery: Ladnaansho Lexar JumpDrive File fudayd